‘डिप्रेसनमा परेका बालबालिकाले समयमै उपचार नपाए आत्महत्या गर्नसक्छन्’ – SatyaPatrika
‘डिप्रेसनमा परेका बालबालिकाले समयमै उपचार नपाए आत्महत्या गर्नसक्छन्’
सुर्खेत । कान्तिबाल अस्पताल काठमाडौंमा कार्यरत, बाल मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. अरुण राज कुवँरका अनुसार जसरी युवा वा ठूला मानिसमा मानिसिक रोग हुन्छ । त्यस्तै खालको बच्चामा पनि हुन्छ । बच्चामा मानिसिक रोग बंशानुगत पनि हुने गर्दछ । अर्को बातावरण र बंशानुगतको मिश्रणले पनि हुनेगर्दछ ।
बच्चा कस्तो बातावरणमा हुर्केको छ ? भन्ने कुरामा यो समस्याले निर्भर गर्छ । सामान्यतया परिवार, विद्यालय र सामाजिक परिबेशले बालबालिकाको शाररीक तथा मानसिक वृद्धि विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । उनका अनुसार घर परिवारमा उनका बुवाआमा सँधै झगडा गर्छन् भने पनि परिवारका बालबालिकामा डिप्रेसन देखिन्छ । यस्तै स्कुलमा शिक्षकहरूले धेरै हप्काउने पिट्ने गर्नाले पनि बच्चामा डिप्रेसन देखिनसक्छ । परिवारका कसैमा डिप्रेशन छ भने पनि वंशानुगत कारणले बालबालिकामा पनि सम्भावना धेरै हुन्छ ।
डा. कुँवरले भने, ‘हुर्कदै र बढ्दै जाँदा हरेक बालबालिकाले विभिन्न तनावपूर्ण परिस्थितीको सामना गर्ने गर्दछन् । कल्पना नै नगरेका घटनाहरू जस्तै, प्राकृतिक विपत्ति, ठूलो भईचालो, बाढी, पहिरो, आगलागी, दुर्घटना, यौनदुव्र्यवहार, सामाजिक तथा राजनैतिक द्वन्द्व जस्ता घटनाले पनि बालबालिकामा मानसिक आघात पर्न सक्दछ । यस्ता अकल्पनिय घटनाहरू तथा दुखद परिस्थितीहरूको सामना गर्नुपर्दा अधिकांश बालबालिकामा विभिन्न मनोवैज्ञानिक पतिक्रियाहरू देखा पर्न सक्दछन् ।’
बाल मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. अरुण राज कुवँरका अनुसार सानो उमेरमा सजिलैसँग आफ्नो कुरा अरुलाई भन्न नसक्ने हुँदा ठूलो मानिसको जस्तो बालबालिकाको समस्या सजिलै पत्ता लाग्दैन । तर उनीहरूले गर्ने व्यवहारले बच्चामा डिप्रेसन छ छैन ? भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
बच्चाहरु चिन्तित छन् भने विद्यालय जान मन नपराउने, टोलाउने, डराउने, एक्लै बस्न खोज्ने, निराश देखिने, खान मन नगर्ने, राति तर्सिएर उठ्ने, दुःखी भएर बस्ने, साथीसँग खेल्न मन नपराउने, सुत्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । यसका साथै डिप्रेसन भएका बालबालिकामा काममा जाँगर नदेखाउने, पढ्न नमान्ने, पेट दुख्ने, पखला भइरहने जस्ता लक्षण देखिन्छन । तर, स्वास्थ्यजाँच गर्दा कुनै समस्या देखिँदैन ।
‘बालबालिकामा डिप्रेसन देखिएको लामो समयसम्म उपचार गरिएन भने त्यस्ता बालबालिकाले आत्महत्या गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । उनीहरुको उमेरअनुसार सिक्ने र पढ्ने काम नहुँदा पछिसम्म मानसिक तनाव रहिरहने हुनसक्छ । बालबालिकालाई डिप्रेसनबाट बचाउन नियमित व्यायाम गराउने, घरको राम्रो र मायालु वातावरणमा हुर्काउने गर्नुपर्छ । बाबालिकालाई गाली गर्ने र हप्काउने गर्नु हुँदैन’ डा. कुँवरले भने, ‘यदि कुनै पनि बालबालिकामा डिप्रेसनको लक्षण देखिए बेलैमा चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । समयमै उपचार गरियो भने कडा खालको डिप्रेसन रहेछ भने पनि उपचार पछि पूर्ण निको हुन्छ ।’
युगान्डाकी गायिका वियोन्सेसँंग राजनराजले गाए ‘ल्यासे पाउ’ (भिडियो)
टी-ट्वान्टीमा सर्वाधिक रन जोड्ने चार खेलाडी